Qupzilla ichatsiva Konqeror sewebhu browser yeiyo KDE Project | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rapfuura takagamuchira nhau dzinoshamisa dzekuti iyo Qupzilla browser ichave chikamu cheiyo KDE chirongwa. Nekudaro, iyo bhurawuza ichasiya Github kuti ipinde iyo KDE yekuvandudza chikuva.
Qupzilla inotora iyo default application mukati meiyo chikamu cheiyo KDE Project. Izvi zvinoreva kuti Konqueror haichazove iyo desktop desktop uye ichatsiviwa naQupzilla. Zvisinei pane zvimwe.
Sezvakataurwa nemusoro wekusimudzira kwe Qupzilla y iyo KDE Wiki, iyo webhu bhurawuza inogona kuve neshanduko yezita. Izvo hazvina kugadziriswa parizvino, asi zvinogona kudaro chinja zita ugozvidaidza kuti Konqueror, uchimonyanisa curl zvakanyanya. Kune mamwe mazita uye usati waita shanduko, rondedzero yakadaro ichavhoterwa uye kusarudzwa neKDE Nharaunda.
Qupzilla inogona kutumidzwa zita rekuti Konqueror kana Nharaunda ichizvida
Qupzilla ibhurawuza rewebhu rinoshandisa iyo QtWebEngine webhu injini, iyo injini yewebhu imwechete inoshandiswa newebhu mabhurawuza akadai seGoogle Chrome kana Chromium. Nekudaro, kusiyana neyekupedzisira, Qupzilla anga ari yakagadziridzwa kuve isingaremi uye ine mashoma ekuwedzera, kuti uve wakareruka kupfuura Google Chrome.
Qupzilla iri kure nekuita seGoogle Chrome kana Mozilla Firefox, asi ichokwadi kuti mumwedzi ichangopfuura iyi bhurawuza yave kuwedzera kufarirwa, iri mukuparadzirwa kwakawanda seye default browser.
Ini pachangu ndinoda Qupzilla, yakajeka uye ine simba browser, asi ichokwadi kuti Zvinoenderana zvakanyanya pa KDE desktop uye kana ukasashandisa ino desktop, kunaka kweQupzilla hakuna kuwanda. Chero zvazvingaitika, zvinoita sekunge vashandisi ve KDE vanozobatsirika, sezvo Konqueror inopfuura chishandiso, rave software isingachashandi, asi izvi zvinogona kuchinja Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Qupzilla ichatsiva Konqeror sewebhu browser yeiyo KDE Project
International Space Station inogadzirira kugamuchira komputa huru